किन गएनन् त पल आँचलको विहेमा कारण यस्तो रहेछ । – Online Nepal
किन गएनन् त पल आँचलको विहेमा कारण यस्तो रहेछ ।
March 13, 2020 1327
विहिवार आँचल शर्माले आफ्नो एक वर्ष देखिको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गरेकी छन् । उनले प्रेमी उदिप श्रेष्ठसंग लगनगाँठो कसेकी हुन् । आँचलको विवाह अघि उनको पल शाहसंग नजिकको सम्बन्ध थियो । दुवै जनाले एक अर्कालाई मिल्ने साथी बताउँदै आएका थिए । तर आँचलको विवाहमा सबै कलाकार पुग्दा पल भने पुगेनन् । पललाई आँचलको विवाहमा नदेखेपछि विभिन्न अड्कल गरिएको छ ।
पल शाह ललितपुरको गोदावरीमा एउटा म्युजिक भिडियोको सुटिगंमा ब्यस्त रहेका थिए । उनले त्यो कुरा सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएका छन् । उनले फेसवुकमा लाइभ आउँदै आफु दिनभर ब्यस्त भएको बताएका थिए । उनलाई फेसवुक लाइभमा आउँदा आँचलको विवाहमा किन नजानुभएको हो ? तपाईलाई आँचलले निम्ता कार्ड पठाएकी थिइनन् ? भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै पलले आफु दिनभर ब्यस्त भएका कारण आफु जान नपाएको बताएका छन् । उनले आँचलले आफ्नो विवाहको निम्ता कार्ड भने पठाएको पनि बताएका थिए ।
Prevएबीएस सहित पल्सर २२० को बिक्री सुरु, यस्तो छ मूल्य र अफर
Nextकोरोना ठूलो असर पुगेको इरानमा एकै दिनमा ८५ जनाको निधन
भाग्य र इतिहाससँग हारेको मान्छे दीपेन्द्र,जनता अझ खोजी रहेछन त्यो रातको रहस्य(भिडियो हेर्नुहोस)
नेपाल आइडल सिजन ३’को फाइनल भदौ १२ गते हुँदै, को होलान् विजेता ?